KNOWLEDGE Archives - ApannPyay Media
January 27, 2021 by ApannPyay Media
ဖတ်ဖူးလား ကြက်နဲ့သိမ်းငှက် အကြောင်း တစ်ခါတုန်းက တောင်စောင်းတစ်ခုပေါ်မှာ သိမ်းငှက်အသိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒီသိမ်းငှက်အသိုက်မှာတော့ သိမ်းငှက်ဥတွေရှိပါတယ်။တစ်နေ့တော့ လယ်သမားရဲ့သားတစ်ယောက်ဟာ တောင်ပေါ်သွားရင်းနဲ့ သိမ်းငှက်ဥကိုတွေ့တော့ ကြက်ဥလို့ထင်ပြီး ကောက်လာပြီးတော့ ကြက်ခြံထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကြက်တွေအကောင်ပေါက်လာပါလေရော၊အဲဒီအခါ သိမ်းငှက်လေးလဲ ပေါက်လာတာပေါ့။အဲဒါနဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိမ်းငှက်လေးဟာ ကြက်တွေကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းလာပါတယ်။ကြက်တွေနဲ့တော့ အရွယ်အစားမတူပေမယ့် မွေးကတည်းက ကြက်စာတွေစားပြီး ကြက်တွေလိုပဲ နေခဲ့ရတာပေါ့။ တစ်နေ့ကျတော့ကောင်းကင်မှာ သိမ်းငှက်တွေပျံနေတာကို အောက်က သိမ်းငှက်က ကြည့်ပြီးတော့ ” ငါလဲသူတို့နဲ့ အမွေးအတောင်တွေတူတူပါပဲ ငါလဲသူတို့လို အမြင့်ကြီးမှာ ပျံနိုင်ရင်ကောင်းမယ်” လို့ပြောပါတယ်။ အနားက ကြက်တွေက ရယ်ပြီးတော့ ” မင်းက ကြက်ပါကွာ၊ငါတို့ကြက်တွေဟာ ဒီလောက်အမြင့်ကြီးမပျံနိုင်ပါဘူးကွာ။မေ့ထားလိုက်စမ်းပါ” အဲလိုပြောတဲ့အခါ သိမ်းငှက်လဲ ပျံဖို့ မကြိုးစားကြည့်တော့ပဲ ကြက်တွေနဲ့အတူတကွ သေတဲ့အထိ နေထိုင်သွားပါတော့တယ်။ ဒီပုံပြင်လေးကို သေချာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် … Read more
မျက်နှာအသားရေပျက်စီးနိုင်လို့ မျက်နှာအရေပြားပေါ်မှာ လုံးဝမသုံးသင့်တဲ့ ပစ္စည်း၅မျိုး . မင်မင် ဒီရက်ပိုင်းမအားလို့ အရင်ဟာလေးတွေ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် DIY တွေ Homemade တွေဆိုပြီး အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ Skin Care ကြတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့ မင်မင်က ဒီနေ့ Homemade တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားစရာတွေ ပြောပြသွားပါ့မယ် မျက်နှာအရေပြားပေါ်မှာ လုံးဝမသုံးသင့်တဲ့ ပစ္စည်း၅မျိုးအကြောင်းပါ ၁။ ခန္ဓာကိုယ်လိမ်းတဲ့ Body Lotion ဘာလို့ထိပ်ဆုံးတင်ထားလဲလို့မေးရင် လူတွေအလုပ်များဆုံးအရာမို့လို့ပါပဲ။ မျက်နှာလိမ်းစရာကုန်သွားတဲ့အခါ မျက်နှာပြောင်ကြီးမနေတတ်တဲ့သူတွေက လိုးရှင်းတွေလိမ်းတတ်ကြပါတယ်။ လိုးရှင်းတွေနဲ့ မျက်နှာလိမ်း Cosmetic တွေရဲ့ မတူတဲ့အချက်က လိုးရှင်းတွေဟာ ပြစ်နှစ်တယ်၊ အဆီများတယ်၊ အနံ့ပြင်းပါတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့်ပဲ ချွေးပေါက်ပိတ်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တာတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ၂။ သကြား သကြားဆိုရင် တချို့လူတွေတန်းပြေးမြင်မိကြမှာပေါ့။ “ဘာတဲ့လဲ … Read more
အသားပတ်လို့ စိတ်မညစ်နဲ့ ဆောင်းတွင်းဘက် အအေးလွန်ကဲလို့ အသားပတ်ကြတဲ့သူများအတွက် လွယ်ကူ ထိရောက် အကုန်အကျနဲတဲ့ နည်းလမ်းလေးပေးမယ်နော်… ခရမ်းချဉ်သီးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး အထဲက အဆန်တွေကိုထုတ်လိုက်ပါ။ အဆန်တွေကုန်သွားရင် ခရမ်းချဉ်သီးခြမ်းနဲ့မျက်နှာအနှံ့ အသာအယာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ၁၀ မိနစ်လောက် ထားပြီးရင် ရေနွေးနွေးနဲ့ဆေးချပါ။ အသားပတ်တဲ့အခါတိုင်း လုပ်ပေးရင် မျက်နှာ အသားအရေပါ ကြည်လင် ချောမွေ ့သွားလိမ့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးမှာပါတဲ့ ဗိုက်တာမင်-စီ နဲ့ ဗိုက်တာမင်-အေ က မျက်နှာအသားကို ချောမွတ်ကြည်လင်စေပြီး အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (လုံးဝ) မရှိပါ။ ဤစာဖတ်သူများအားလုံး ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ရွှေချစ်သူ မှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ အသားပတ္လို႔ စိတ္မညစ္နဲ႔ ေဆာင္းတြင္းဘက္ အေအးလြန္ကဲလို႔ … Read more
ဆင်းရဲသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဟိုး တစ်ချိန်က အရမ်းကို ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူ့ကို အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ သနားပြီး သူ့ကိိုု ကြီးပွားလာအောင် ကူညီချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်… သူဌေးက သူ့ကို နွားတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်… သူ့ကို လယ်ယာထွန်ယက်ဖို့ သေချာမှာခဲ့တယ်…အခုချိန်မျိုးစေ့ ကြဲထားပြီး ကောင်းကောင်းထွန်ယက်ရင် ဒီနှစ်ကုန်ရင် ဆင်းရဲတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ဝေးဝေးခွာနိုင်တော့မှာပါလို့ ပြောခဲ့တယ်… ဒီသူဆင်းရဲလေးကတော့ အစပိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ရှာတယ်…ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်မှ မကြာလိုက်ဘူး… နွားက မြက်စားတယ်… လူက ထမင်းစားတယ်…ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝက အရင်ကထက်တောင်ခက်ခဲနေသေးတယ်… သူဆင်းရဲလေးက ပြန်စဉ်းစားတယ်…နွားကို ရောင်းလိုက်ပြီး ဆိတ်တချို့ဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်…တစ်ကောင်ကို အရင်သတ်စားလိုက်ပြီး ကျန်တာတွေကို ဆက်မွေးထားလိုက်မယ်… ဆိတ်ကလေးတွေမွေးလာလို့ ကြီးလာရင် ပြန်ရောင်းစားလို့ရတယ်… ဒါလဲ တော်တော်လေး အမြတ်ရနိုင်တယ်… သူဆင်းရဲလေးရဲ့ အစီအစဉ်ကလဲ အထမြောက်လိုက်ပါတယ်… ဆိတ်တစ်ကောင်ဘဲ သတ်စားလိုက်တယ်…နောက်ပိုင်းမှာ ဆိတ်ကလဲ တော်တော်နဲ့ … Read more
ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အန္တရာယ်မရှိတဲ့ ကျန်းမာရေး လက္ခဏာများ တခါတရံမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးဆိုးရွားရွား တခုခုဖြစ်တော့မယ်လို့ ထင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် ကျန်းမာရေးလက္ခဏာတွေကတော့ ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် ထူးထူးခြားခြား စိုးရိမ်လောက်စရာ မရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းဟာ Heart Attack ဖြစ်ပေါ်တော့မယ့် လက္ခဏာတွေထဲမှာ ပါဝင်ပေမယ့် နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာ မရှိသူတွေ အနေနဲ့တော့ ထူးထူးခြားခြား စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများခြင်းနဲ့ ရင်ပူရင်ဆာ ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်း ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး မကြာခဏ ဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးစစ်မှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ (၂) နားအူခြင်း နားအူခြင်းဟာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ … Read more
တစ်သက်လုံး ထီ တစ်ခါမှမပေါက်ဖူးဘူးလို့ ပြောနေသူတွေ၊ ထီပေါက် ချင်သူများအတွက်
တစ်သက်လုံး ထီ တစ်ခါမှမပေါက်ဖူးဘူးလို့ ပြောနေသူတွေ၊ ထီပေါက် ချင်သူများအတွက် ထီပေါက်ချင်သူများအတွက် …. တစ်သက်လုံးထီတစ်ခါမှမပေါက်ဖူးဘူးလို့ ပြောနေသူတွေ၊ထီတော့ ပေါက်ဖူးချင်တယ်လို့ ပြောနေသူတွေ ၊ထိုးသာထိုးနေရတယ် ပေါက်လည်းမပေါက်ဘူး လို့ ပြောနေသူတွေအတွက်ထီထိုးနည်းလေးတစ်ခု အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လက်ရှိအောင်ဘာလေထီဆုမဲ စနစ်မှာဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲ စနစ်ပါရှိနေတဲ့အတွက် မပေါက်မရှိထီထိုးနည်းရှိပါတယ်။ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာစနစ်အရအက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးတူရင် ငါးသောင်းဆု ပေါက်တဲ့အတွက် ထီထိုးမယ်ဆိုရင် ရှေ့ဂဏန်းကို၁၀, ၁၁ , ၁၂…..ကနေ ၉၉…..ထိပါတဲ့( အရင်က မင်္ဂလာစုံတွဲခေါ်တဲ့မင်္ဂလာစုံတွဲထီ) မင်္ဂလာစုံတွဲအတွဲ( ၉၀ ) ဝယ်ထိုးရင် မပေါက်မရှိပါဘဲ။ ထီလက်ကားဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်ရင်မင်္ဂလာစုံတွဲတစ်တွဲ( အစောင်လေးဆယ် )ကို ရှစ်ထောင်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။အတွဲ ၉၀ဆိုတော့ ၇၂၀ဝ၀ဝကျပ်တော့ ရင်းရမှာပေါ့။ လက်ရှိဆုမဲစနစ်အရ အဲ့ဒီ့အတွဲ ၉၀ ထဲက ငါးသောင်းဆု သုံးဆုကျိန်းသေပေါက်ပါမယ်။ကိုယ့်ကံထူးရင် ထူးသလိုထီဆုကြီးတွေလည်း ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထီထိုးရင်ပေါက်ချင်သူများ၊တစ်သက်မှာတစ်ခါတော့ … Read more
ဘာကြောင့် မြန်မာပြည် မွဲနေရလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခု
ဘာကြောင့် မြန်မာပြည် မွဲနေရလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခု ပေါက်တူးတောင် နိုင်ငံခြားကနေ ကွန်တိန်နာလိုက်သွင်းပြီး သုံးနေရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဖြစ်… ကြုံလို့တွေ့တာနဲ့ ဘာတွေလဲလို့ ဒီလိုပဲ မေးလိုက်တာ။ ပေါက်တူးတွေပါတဲ့။ စက္ကူပုံးကိုတောင် သေချာဖွင့်ပြလိုက်သေးတယ်။ ပေါက်တူးတောင် တရုတ်ပြည်က ကွန်တိန်နာလိုက်သွင်းပြီး သုံးနေရတဲ့ မြန်မာပြည်ပါလားလို့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က ရင်းမြစ်တွေကို တန်ဖိုးမြင့် နည်းပညာမြင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ပဲ အသုံးပြုနေတာမို့ ဒီလို နည်းပညာမလိုတဲ့ တန်ဖိုးနည်းကုန်စည်တွေကို နိုင်ငံခြားက ဝယ်သုံးနေတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ (ရန်အောင်ကျော်) Credit Unicode ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ မြဲေနရလဲ ဆိုတဲ့ အေျဖတစ္ခု ေပါက္တူးေတာင္ နိုင္ငံျခားကေန ကြန္တိန္နာလိုက္သြင္းၿပီး သုံးေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အျဖစ္… ၾကဳံလို႔ေတြ႕တာနဲ႔ ဘာေတြလဲလို႔ ဒီလိုပဲ … Read more
ဆွမ်းခံကြွတဲ့ သံဃာတော်တွေမြင်တာနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ အကုန်ရပ်ပြီး အရိုအသေပေးတဲ့ မြို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံး နေထိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ အလှူအတန်းအရက်ရောဆုံးလို့ နာမည်ကြီးပါတယ် ….. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာများရဲ့ အလှူဒါန ရက်ရောမှုကတော့ ပြောစရာ မလိုအောင်ကို ပြည့်စုံလွန်း လှတာပါ …. ဒါ့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတွေဟာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေ ဘုန်းဘုန်း တွေကိုလည်း ဆွမ်းလောင်းတာ ကထိန်ခင်းတာ အလှူဒါန ပြုတာတွေ့ အမြဲလုပ်လေ့ ရှိပါတယ် …. ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြချင်တာ လေးကတော့ တကယ့်ကို လေးစားဖွယ် ကောင်းတဲ့ ထီးချိုင်မြို့နဲ့ တကောင်းမြို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာတွေပါပဲ… ထီးချိုင့်နဲ့ တကောင်းမှာ နံနက်စောစော နှင်းဝေဝေ ချမ်းအေးလှတဲ့ ရာသီမှာတောင် သံဃာတော်တွေဟာ … Read more
စင်္ကာပူပြန် Q ဝင်သူများရဲ့ လေးစားစရာစိတ်ဓာတ် နဲ့ လုပ်ရပ်လေး
စင်္ကာပူပြန် Q ဝင်သူများရဲ့ လေးစားစရာစိတ်ဓာတ် နဲ့ လုပ်ရပ်လေး မတွက်ကပ် အပါးမခိုခြင်းနဲ့ စည်းလုံးညီညာကြတဲ့အခါ လွန်ခဲ့တဲ့လ​တွေရက်​တွေအတွင်းနိုင်ငံခြားပြန်​တွေဟာ Quartine စင်တာ ( ဟိုတယ်နဲ့ ဘုန်း​တော်ကြီး​ကျောင်းများကလွဲလို့ ) အ​ဆောင် ​တော်​တော်များများမှာ Quartine ဝင်ကြရသူ​တွေရဲ့အဆင်မ​ပြေမှု​တွေfacebook တင်လာတာ​တွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ၊ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အ​ထွေ​ထွေဆိုသလို ဖတ်ရသူ​တွေမှာလည်း အမျိုးမျိုးခံစားရကာ အမြင်အမျိုးမျိုး​ရေးကြတာ​တွေထဲ ဖတ်ရှု့ရကာ စာနာ​သနားလို့ ​ဖေးမ​ဖြေသိမ့်​ပေးသူ​တွေ ကိုယ့်အိမ်မှမဟုတ်တာလို့ အပြစ်မြင်ဆိုကြသူ​တွေလည်း​တွေ့ရပါတယ် ။ တစ်ချို့ဆိုကိုယ့်​သောက ကိုယ်​ရေးတာက​နေ အပြစ်တင်ခံရ​တော့ ပို​သောက​ရောက်ကြရရှာပါတယ်။ ဒီ​​နေ့မှာ​တော့အခုမြင်ကွင်းမျိုး​လေးမြင်ရကာစိတ်ချမ်း​​မြွေရသလို အားတက်ရမှုပါရလာလို့မြင်ရခဲတဲ့မြင်ကွင်းမြင်ခွင့်ရ​စေသူနဲ့တကွ ဒီလိုမြင်ရဖို့ ​ကောင်းတဲ့စိတ်ထားဇွဲလုံလဝီရိယနဲ့​ဖော်​ဆောင်ကြသူများကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြူလိုလာပါတယ် ။ ဒီမြင်ကွင်မြင်ရသူတိုင်းကလည်းစာ​ရေးသူနဲ့ထပ်သူချီးကျူးဂုဏ်ပြူလိုစိတ်မှာမတိုင်ပင်ဘဲတူကြမယ်ယုံကြည်မိတယ်။ ဒီမြင်ကွင်းက စင်ကာပူမှ 5th Relief Flight ဖြင့်ပြန်ကြလာကြသူ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဆောင် (ရွာသာကြီး) မှာFacilities Quartine ဝင်နေသူများမှ အဆောင် (D001 … Read more